विदेश अध्ययनमा जाने बिद्यार्थलाई अब पर्यटन दुत बनाउनु पर्छ ! जोशी – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
विदेश अध्ययनमा जाने बिद्यार्थलाई अब पर्यटन दुत बनाउनु पर्छ ! जोशी
पुर्बवत स्तरको लगाव, प्रक्रिया र तौर-तरिकाबाट चाहिं कम्तिमा नयाँपन आउछ भन्न बिस्वास लिन सकिदैंन । हामीसंग समय कम्ति छ, द्रुतगतिमा विकास आजको आवस्यकता हो । जसलाई पुरा गर्न कर्तव्यपरायण-कर्मनीस्ठ संघ-संगठन र नेतृत्वको आवस्यकता पर्दछ ।
मानब प्रजाति यो संसारमा अस्तित्वमा आएको समयदेखि नै घुमन्ते हो । पछि, मनु, कौटिल्य र कोलम्बसहरु पनि स्थानातरित हुने तथा घुम्ने प्रथाले गर्दा नै हो यी आधुनुक सिद्धान्तहरु प्रतिपादित भएको अनि अहिलेको अमेरिका पत्ता लागेको । आधुनिक पर्यटन ब्यबसायको कुरा गर्दा १९२२ तिरको स्लोभाकिया र पोलेन्डका हिमालहरु चड्ने प्रथालाई अधारबिन्दु मान्न सकिन्छ । यहि क्रम हुदै एक्काइसौ सताब्दीको पुर्बार्धबाट भने यहि घुमन्ते प्रथालाई ब्यबस्थित गर्दै पर्यटन व्यवसायका रुपमा अगाडी सारिएको पाइन्छ । यहि समयबाट पर्यटनको बैसाखी टेकेर विश्व परिवेसको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न पग्यो ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा केहि साशकहरु विदेश भ्रमणमा जाने र बिदेशी कुटनैतिक व्यक्तित्वको आगमन तथा जनमानसको तीर्थाटनको परिपाटीले आन्तरिक तथा बाहिय पर्यटन अस्तित्वमा आएको मनिन्छ । नेपालको बर्तमान परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा कृषि, हाईड्रोपावर, रेमिट्यान्स र पर्यटन नै मुख्य हुन् । तथापि दिर्घकालिन ढंगबाट आधुनिक प्रबिधिको अवलम्बन गर्ने कुरामा अझैपनि हामि चुकेको अवस्था छ । यसरि बिकास हुने क्रममा,पर्यटनको भबिस्य निर्दिस्ठ गर्ने सन्दर्भमा अझै पनि हामि संक्रमणकालबाट नै गुज्रिरहेका छौ । पर्यटन प्रवर्धनमा बिभिन्न समयमा ठुला र महत्वकांक्षी परियोजनाहरु संचालित नभएका होइनन् भिजिट नेपाल १९९८, नेपाल भ्रमण बर्ष २०११, घुमफिर बर्ष २०७३ जस्ता आक्रामक कर्यक्रमहरु मनाईसक्दा पनि पर्यटन क्षेत्रमा सन्तोसजनक उपलब्धी भने देखिएको छैन । अब फेरी, सूचना र प्रविधिको यो युग “डिजिटाइज् वल्ड’’ मा पर्यटनको बदलिदो विश्व-परिवेस संग सामन्जस्य गर्दै एक फड्को मार्नका निम्ति सन् २०२० मा नेपालले “भिजिट नेपाल २०२०” लिएर आउदै छ । स्वदेस तथा बिदेसमा रहेका नेपालि युवा बिध्यर्थिहरुको संलग्नता तथा भिजिट नेपाल २०२० को आवस्यकता, महत्व र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाब बारे पर्यटनका सूक्ष्म तथा बृहत पक्षहरुमा नेपाल पर्यटन बोडका सि.ई.ओ. दिपक राज जोसीसंग अभियान सम्बाददाता संग गरिएको कुराकानी ।
एउटा आम बुझाई बाट उब्जिएको प्रश्न यो छ कि: नेपाल यती राम्रो देश छ, यहाँ करोडौको संख्यामा पर्यटक किन आउँदैनन् ?
आम जनमानसको स्तरबाट हेर्ने हो भने यो बुझाई सहि हो जस्तो लाग्नु स्वभाविकै हो। तर पर्यटकहरु भ्रमणमा आउन तथा पर्यटन ब्यबसाय सन्चालन गर्न सर्बप्रथम “पर्यटकिय गन्तब्य” हुन जरुरी छ । त्यसरी पर्यटकिय गन्तब्य “डेस्टिनेसन्” हुन एउटा पक्ष मात्र भएर पुग्दैन बहु घटकहरुको तालमेल बाट मात्र गन्तब्य बानाउन सकिन्छ। जस्तो, हामीसंग सुन्दर रारा-ताल भएर मात्र पुग्दैन त्यहाँ सम्म पुग्ने यतातात पहुच, रहदा-बस्दा हुनुपर्ने सेवा-सुबिधा, त्यहाँ वरपर गर्न सकिने गतिबिधि लयायतका अन्य ४-५ वटा पक्षहरुको समस्ठिगत स्वरुप बनेपछी मात्र एउटा पर्यटकिय गन्तब्य बन्छ ।
सन्सारको जो कोही मुलुकमा पनि गन्तब्य निर्धारित छन । जस्तो फ्रान्समा कि आइफेल-टावर कि पेरिस-शहर, इन्डोनेसियाको बाली लगायतमा मात्र पर्यटक जाने हो, पर्यटक पुरै देस घुम्दैंन। त्यसैले हामिकहाँ सिंगो पर्यटन क्षेत्रकै सम्बन्धमा बुझाई अलिक कमजोर भएको पो हो कि ?
तर पछिल्लो समयमा, गएको २-३ बर्षहरुमा हेर्ने हो भने नेपालमा स्रोत र साधनको सिमितताको बाबजुत पनि पर्यटक आगमनको क्षेत्रमा उल्लेख्या सुधार भएको पाउन सकिन्छ ।
भिजिट नेपाल १९९८, नेपाल भ्रमण बर्ष २०११, घुमफिर बर्ष २०७३ मानाई सक्दा पनि पर्यटन क्षेत्रमा सन्तोसजनक उपलब्धी देखिएको छैन, अब फेरी यो “भिजिट नेपाल २०२०” नै चाही किन? यसका विषेशताहरु के के हुन ?
हेर्नुस, हाम्रो पर्यटन ब्यबसाय धेरै बिकशित हुन नसक्नुको कारण समग्रमा हामिकहाँ पर्यटनको बुझाईनै अलिक फरक किसिमको छ । यो एउटा बिशुद्ध ब्यबसाईक र प्राबिधिक विसयवस्तु हो। तर कतिपय अवस्थामा यसलाई सामाजिक र राजनैतिक अधिकारको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
पछिलो समयमा हाम्रा छिमेकि मुलुकहरुले पर्यटन ब्यबसायमा ठुलो फड्को मारेको पाइन्छ जस्तो: भुटान, श्रीलङका, भारत, माल्दिप्स जस्ता देशहरुको पर्यटन बिकाश भैरहँदा हाम्रो देश गृह-युद्धको चक्रभियुमा फसेको थियो। नेपाल करिब २० बर्षको समय द्वन्द र राजनतिक अस्थिरताको चपेटामा परिनै रहयो फलस्वरूप यो संक्रमणकालले उधोग व्यवसायमा अतुलनीय नोक्सानी हुन गयो भने पर्यटन क्षत्र यसको दिर्घकालिन सिकार बनिनै रह्यो।
छुट्टै एउटा आफ्नै अस्तित्व बोकेर अघि बढेको नदेखिएतापनि नेपालमा पर्यटन ब्यबसाय सबै भन्दा बडी लाभ दिलाईरहेको एक ब्यबसाय चाहिं पक्कै हो। हाम्रो सेरोफेरोको सरसफाई, द्रुत-भरपर्दो इन्टरनेटको सुबिधा, बाटो-यातायात, सफा-सुद्ध खानेपानी लगायतका तत्वहरुले पर्यटन प्रवर्धनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ।
अब, भिजिट नेपाल २०२० को सन्दर्भमा कुरा गर्दा विश्व भरिनै अहिले पर्यटन प्रतिको सोच बदलिएको छ । जसरि हिजोका दिनहरुमा पर्यटनलाई “लिजर टु प्लिजर” भन्ने गरिन्थ्य तर आज उक्त पर्यटनलाई “आर्थिक समुन्नति, उद्योग-ब्यबसाय र बिकाशको आधार” मान्न थालिएको छ । तसर्थ अब हाम्रो जस्तो देशको लागि पर्यटन बरदान साबित हुन सक्ने आधारहरु मध्यको एउटा परिस्कृत सुनौलो कार्यक्रम हो भिजिट नेपाल २०२०। त्यो संसगै ‘साहसिक यात्रा र हिमाल अनि सारीरिक बलिस्ठता मात्र नेपालको पर्यटन नभएर हिमालको काखमा रहेको समाजको जिबनसैली र सस्कृति भित्रका कोमलपना जस्ता स-साना पक्षहरुले जीवनलाई नौलो अनुभूति “लाइफ टाइम एक्स्पेरियंस्” दिन्छन्’ भन्ने कुरा बोध गराउन पनि यसको आवस्यकता महसुस भएको हो । नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रमा “डीजर्बसन एन्ड इनोभेसन” को सैलीलाई प्रश्रय दिनका निम्ति पनि यसको महत्व ज्यादा छ । यो पर्यटन बोड, नेपाल सरकार, निजि-क्षेत्रको मात्र कार्यक्रम नभएर आम नेपालि जनमानसले हातेमालो गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने एक उत्सब हो ।
पर्यटन उधोग-ब्यबसायमा पूर्वाधार देखि लिएर निर्णय निरुपणको तहसम्म पनि देखिएका समस्याहरु के हुन् ? यसलाई कसरि चिर्ने ?
हामीले गरेको सुजाब भनेको: पुर्बवत स्तरको लगाव, प्रक्रिया र तौर-तरिकाबाट चाहिं कम्तिमा नयाँपन आउछ भन्न बिस्वास लिन सकिदैंन । हामीसंग समय कम्ति छ, द्रुतगतिमा विकास आजको आवस्यकता हो । तसर्थ पर्यटन मत्र होइन उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रहरु हाइड्रोपावर लगायतका अन्य मेरुदण्डको विकास प्रक्रियामा पनी फास्ट ट्रयाक नीति खोज्नु जरुरि छ । जसलाई पुरा गर्न कर्तव्यपरायण-कमनीस्ठ संघ-संगठन र नेतृत्वको आवस्यकता पर्दछ । पूर्वाधारको बिकासमा मात्र अलिकित बल गर्न सक्ने हो भने पनि पर्यटनलाइ ठुलो राहत पुग्छ ।
प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो रोजी रोटीको लागि ब्यबसाय गरेको भरमा नेपालको पर्यटन ब्यबसाय धानिएको छ भानिन्छ । के पर्यटनको क्षेत्रमा सरकारको स्पस्ट नीति तथा कार्यक्रम नभएकै हो त ?
प्रथमत; नेपालको पर्यटन ब्यबसायमा प्राइभेट सेक्टरको ठुलो भुमिका छ । जो स्वीकार्य सत्य पनि हो । समग्र पर्यटन व्यवसायमा; सेवा दिने कुरामा, लगानीको क्षेत्रमा नयाँपन लिएर आउने कुरामा पनि प्राइभेट सेक्टरको ठुलो भुमिका छ। तर त्यसो भन्दैमा सरकारको योजना नीति तथा कार्यक्रम नै छैन भन्नु एक भ्रम र अफवा मात्र हो। प्राइभेट सेक्टरलाई नेत्रित्वदाई भूमिका दिनुपर्छ भनेर नै नेपाल पर्यटन बोर्ड आएको हो । बोर्डमा सदस्यहरु पनि ५ जना प्राइभेट सेक्टर र ५ जना सरकारी तवरबाट रहने ब्यबस्था छ।
सुचनाहरु सुचित गराउने कुरा बाकि होला तर नीति तथा कार्यक्रमहरु समय सार्दर्भिक किसिमका छन् । भिजिट नेपाल २०२० प्रति फोकस हुदै बिबिध रणनीति बनाएर हामि अहिले फिल्डमा उत्रिएका छौ: जस्तो कि सिजनल् पर्यटनलाई बर्षभरीनै संचालन गर्ने । हामि आफैले हामीकहाँ पर्यटक बोलाउने समय छुट्याएको जस्तो थिति बसिसकेको छ । यो “अफ सिजन हो नआउ, अथवा अक्टोबर-नेभेम्बर नत्र मार्च देखि जुन सम्ममा आउ” भन्ने प्रवृतिले एउटा ट्रेन्ड बसाईसकेको अवस्था छ। यसलाई भात्काएर बर्षभरिने सिजन हो ! भन्ने बनाउने कामाम हामि लागेका छौ । समर, मनसुन र विन्टर गरेर ३ वटा सिजनलाई प्रोमोट गरेका छौ । समरमा बांगदेश-भारत लग्यायतका देशहरुमा मौसम बेच्ने, मनसुनमा मध्यपूर्व–खाडीमा रोमान्टिक मनसुन बनाउदै बेच्ने, विन्टरमा, चाईनामा लामो समय छुट्टी तथा नयाबर्ष हुने हुदा त्यतातिर जोड दिएका छौ । त्यसैगरी हाम्रो एयरपोर्टको रनवे एकदमै नाजुक अवस्थामा छ । यसलाई पुन-निर्मित गर्दै सहज रुपमा २४सै घण्टाका निम्ति संचालन हुन सक्ने वातावरण बनाउन तथा भैरहवा विमानस्थललाई समेत पूर्णता दिएर ‘फुल मायलेजमा’ संचालनमा ल्याउने । नयाँ तौर तरिकाबाट प्रोमोसनको कामहरु गरिरहेको अवस्था छ। डिजिटल मार्केटिंग लागयतमा पनि हामि ध्यान दिईरहेकै छौ । हाम्रो २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्षलाई हासिल गर्न हामि यसरि अघि बडेका छौ ।
भिजिट नेपाल २०२० को लागि भनेर युवा तथा विद्यार्थीहरुको संलग्नतालाई कसरि ब्यबस्थापन गर्नु भएको छ ?
हरेक परियोजनाहरु सम्पन्न गर्न युवा तथा विद्यार्थीहरुको संलग्नता अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले पनि यसलाई मध्यनजर गरेर देश तथा बिदेसमा रहेका युवा विद्यार्थीहरुसंग सहकार्य गर्ने कुरामा जोड दिएका छौ । पछिलो समयमा हामीले देश बाहिरको पाटोलाई सगेटेर बसेको एन.आर.एन. सग ‘एम.ओ.यु” नै गरेका छौ । त्यसै गरी भिजिट नेपाल युरोप सम्पन भए सगै अर्को “गोल्बलाईज्ड नेपालि फुड” विश्व भरि नेपालि खानाको परिकार र स्वादलाई परिचित गराउने जस्ता कार्यक्रम हामिसंग छन् । युवा कै क्षेत्रमा पर्ने तथा युवाहरुलाई लक्षित गरेर डिजिटल मार्केटिङ्मा भने हामिले ठुलो फड्को मार्ने कार्यक्रम अघि सारेका छौ ।
पछिल्लो समयमा नेपाल बस्ने भंदा बिदेश अद्ययनमा जाने नेपालि विद्यार्थीहरुको संख्या ज्यादा छ । उक्त विद्यार्थीहरुलाई सदुपयोग ‘सद्भावना दुत नै घोसणा गरेर’ लगायत गरेर नेपाल पर्यटन बोडले किन लाभ लिन सकेको छैन ?
विश्व ‘ग्लोबलाईज्ड’ भैसकेको अवस्थामा नेपालि विद्यार्थीहरु बिदेश पढ्न जाने प्रचलन सामान्य नै मान्नु पर्छ । ‘वोर्क पर्मीट’ लिएर खाडीमुलकमा जाने युवाहरु गएको देशहरु भन्दा हाम्रो मुलभूत लक्षित क्षेत्र भनेको बिदेश अद्ययनमा जाने नेपालि विद्यार्थीहरु गएकै देशहरु युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया लगायत नै हुन् ।
यो प्रविधिको विश्वमा प्रचार-प्रसार अब प्राबिधिक पाटो बनिसकेको हुदा बहु-आयामहरुको खोजि गर्नु आजको आवस्यकता हो । अहिले पनि विदेशबाट गुगलमा नेपाल खोज्दा माओबादी द्वान्दकालका तस्बिर त्यसपछि भूकम्पले क्षतीग्रस्त सामग्री देखिन्छ । जे बेसी ‘पोस्ट’ भयो त्यहि ज्यादा आउने रहेछ । तसर्थ बिदेश अद्ययनमा गएका नेपालि विद्यार्थीहरुले राम्रो-राम्रो संघर्षका, सफलताका कथाहरु त्यसै गरि तस्बिरहरु सामाजिक संजालमा प्रकासित गरिदिने हो भने क्रमिक रुपमा सुधार अवस्य आउछ । त्यसै गरि एभरेस्ट-डे, बुद्ध-जयन्ती जस्ता उत्सवका दिनहरुमा साथि सर्कलमा सामान्य छलफल चलाउने कलेजमा सास्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गर्ने जस्ता कार्यक्रमले पनि हामीलाई विदेसमा चिनाउछ । यी र यस्ता ‘की पोइन्ट’ लाई आधार बनाएर त्यसलाई हामि सर्कुलेट गर्ने योजनामा छौ ।
नेपाल भ्रमण बर्ष २०७३ मनाएसंसगै नेपालिहरुमा एउटा घुम्नु पर्छ भन्ने जागरण आयो, तर यति आयो कि ‘आउट बन्ड’ बिदेस घुम्ने जाने परिपाटी बिकाश भयो, नेपालको अर्थतन्त्र र पर्यटन संग ‘आउट बन्ड र इन बन्ड’ को के-कस्तो सम्बन्ध रहन्छ ?
मान्छे स्वदेस आउन या विदेश जाउन, घुम्ने ‘कल्चर’ को बिकाश हुनु पर्यटनको लागि आफैमा एउटा राम्रो सूचक हो । यहाँ खुल्ला प्रतिस्पर्दा छ, यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र चाहानाको कुरा पनि हो । यसमा कसैलाई रोक्ने भन्ने कुरै आउदैन। तर यति सम्म चाहि गर्न सकिन्छा कि; हामिले ‘बेस्ट अफर’ दिने हो । जस्तो एउटा नेपालिलाई ब्याङ्कक् जानु भन्दा मुस्ताङ जानुमा के कति फाइदा छ त? भन्ने कुरा तुलनात्मक रुपमा बुझाउन सक्नु पर्यो । हामि जो ‘डेस्टिनेसन मार्केटिंग” गर्छौ हो यो टिमले मुस्ताङमा अब आन्तरिक पर्यटकले के खोज्दैछ भन्ने कुरालाई ‘बुस्ट’ गर्न सक्नु पर्यो । हाम्रो सस्कृति हेर्न संसारका मान्छे आउछन भने हामि किन नजाने ? हाम्रो अर्थतन्त्र हामि आफ्नै देशभित्र सदुपयोग गरौ ! भन्ने किसिमको जागृति लिएर आउनु पर्ने हुन्छ।
पर्यन आफैमा एउटा गार्हो र सजिलो बिषय हो ।
यसमा “मेन्डेटोरी” र “कम्पल्सन” भन्न नै पाइदैन ।
यहाँ तपाइले पर्यटकलाई ‘चोइस’ र ‘अफर’ दिने मात्र हो ।
नेपालीहरु खासगरी घुम्ने समय भनेको केहि निश्चित छ। मुलभूत रुपमा ‘फेमेली टुर’का रुपमा घुम्ने परिपाटी छ । २-३ वटा सिजनहरु जस्तो: दसैँ तिहारी ताका, स्कुलको लामो छुट्टीको आसपास, चैत बैशाख-नयाँ बर्ष ताका र जाडो विदामा। यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्याकेज कार्यकर्म बनाएर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।
हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको एक खम्बा पर्यटनलाई ‘ग्रामिण-सास्कृतिक पर्यटनका रुपमा’ आम मानिसहरु प्रतिनिधित्व गर्छन फेरी उनीहरुको दैनिकी चल्न गार्हो परिरहेको पनि छ, उनीहरुमार्फत पर्यटनप्रबर्धन र त्यसको लाभांम्स वितरण उनीहरुमै चाही कसरि पुर्याउने ?
हरेक तहमा मानिसहरुको बुझाईको स्तर फरक हुन्छ । जस्तो ग्रामिण भेगमा रेमिट्यान्सबाट दैनिकी चलेका कतिपय नागरिकहरुलाई अर्थतन्त्रको अधार रेमिट्यान्स पनि हो, भन्ने थाह नहुन सक्छ । पर्यटनमा पनि यो प्रसंग लागु हुन्छ यो अरु उद्योग जस्तो नभएर वातावरणमैत्री ब्यबसाय भएको कारणले गर्दा पनि ग्रामिण क्षेत्रमाथि यसको भूमिका र महत्व अत्याधिक हुन्छ ।
तसर्थ संचार गराउनका निम्ति विबिध किसिमका संचार माध्याम र पद्दती अपनाएर आम मानिसहरु समक्ष चेतनाको लहर फैलाउनु पर्ने हुन्छ । कम लगानीमा बडी आम्दानि लिने व्यवसायमा पर्यटन एक नम्बरमै आउछ जो ग्रामीण क्षेत्रको चलायमान अर्थतन्त्रका निम्ति बहुउपयोगी साबित हुन्छ । विश्वकै दुइ ठुलो अर्थतन्त्र बोकेको मुलुकहरु भारत र चिन हाम्रो छिमेकमा भएको कारण अरु व्यवसायमा जस्तो पर्यटनमा तिनीहरुमा परनिर्भर हुनु पर्ने हुदैन। पर्यटन स्वत स्फुर्त आत्मानिर्भर सेवामुखी ब्यबसाय हो । ह़ामीले अहिले सम्म त बिना लगानी २-३ सय बर्ष पुराना मठ-मन्दिर देखाएर तथा ट्रेकिंङको नाममा पुराना ग्रामिण गोरेटाहरु हिडाएर पर्यटनबाट लाभ उठाएका छौ । तर अब समय संसगै यो व्यवसायमा लगानीको दायरा फरिकिलो पर्दै व्यवसायलाई पुनरउर्जित गरेर रोजगारीको अवसरहरुलाई सदुपयोग गरेर दोहोरो लाभ लिन सकिन्छ । जस्तो: एकातर्फ गाउमा पर्यटन सम्बन्धि जागरण तथा अर्को तर्फ रोजागारी मार्फत आर्थिक समुन्नती।
यो बर्तमान अवस्थालाई चिर्दै “इथिकल” ब्यबसाय अभिमुखी हुनका निम्ति नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि “डीजर्बसन एन्ड इनोभेसन” को आवस्यकता महसुस भैसकेको अवस्था छ । यसलाई आम मानिसहरु समक्ष पुर्याउन यी र यस्ता प्रकृतिका अन्तरसम्बाद हरुको आवस्यकता पर्दछ भने संचार माध्यमहरुको भूमिका नेत्रित्वदाई रह्न्छ नै ।
प्रमाणपत्र धितोमा राखेर शैक्षिक ऋण
लजारस ग्रुप ह्याकरको तार्गेट नेपाली बैंकहरु